Madaxweyne Farmaajo & R/Wasaare Kheyre oo Beesha Abgaal Labo Wasiir Siin doona Si Taapit u Noqdo Gudoomiyaha G/Banaadir | Nabadqaad Online
Madaxweyne Farmaajo & R/Wasaare Kheyre oo Beesha Abgaal Labo Wasiir Siin doona Si Taapit u Noqdo Gudoomiyaha G/Banaadir
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa si uga fogaado dhaliil iyo eedeyn uga imaada beesha Wacbuundhan abgaal oo inta badan la siiya Maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu go’aansaday in Beesha Abgaal uu siiyo labo Wasiir si ay xalaal uga noqoto magacabista Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed.
Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha oo arrintan si aad ah ugu fikiray isla markaana Taabid Cabdi Maxamed oo hooyadiisa ka soo jeeda dhinaca Ra’iisal Wasaaraha ayaa ugu dambeyn waxaa uu helaya kalsoonada labada mas’uul marka sida wax loo qorsheeyay lagu dhawaaqo Golaha Wasiirada.
“Ujeedada beesha Abgaal loo siiyay labada Wasiir ayaa waxay tahay in loo qeybiyo harti abgaal iyo wacbuundhan marka ay sidaas noqoto waxaa la doonaya in meesha laga saaro Maamulka Gobolka Banaadir oo beesha Wacbuudhan la siin jiray,marka Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha waxaa ay qorsheystan in Waceysle la siiyo Gobolka gaar ahaan xilkaas waxaa loo magacabaya Taabid Cabdi Maxamed”ayuu yiri mid ka mid ah Siyaasiyiinta Gobolka Banaadir oo sababo dhinaca amaanka u diiday magaciisa.
Xogta ayaa sheegaysa in Taabid Cabdi Maxamed ay u cadahay marka beesha Abgaal loo magacabo labo Wasiir inuu isaga ku fariisan doono Maamulka Gobolka Banaadir taasina ay tahay sida ay doonayaan Farmaajo iyo team-kii kala soo shaqeeyay doorashada.
Fikirka ah in Taabid Cabdi Maxamed loo magacabo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir waxaa soo alifay Lataliyaha Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo aaminsan inuu isaga yahay ninka ka go’da talada Farmaajo.
Lama oga waxaa iska bedeli doona amaanka Gobolka Banaadir iyo musuq maasuqa Gobolka ragaadiyay magacabista Taabid Cabdi Maxamed hase yeeshe rajada laga qabo in amaanka Muqdisho soo hagaago ayaa ah mid aad u fog maadama Taabid Cabdi Maxamed iyo xilka loo magacabayo aad u kala weyn yihii